Pink brecciated mookaite bụ jasper nke nwere ezigbo matriks lined - video
Zụta ekeka na-acha ọcha pink na-ere ahịa n'ụlọ ahịa anyị
Ihe mejupụtara ya bụ pink mebiri emebi nke na-enwu gbaa nke nwere akwa translucent nwere ezigbo matriks lined. Matrix a chọtara na mookaite na-agbaji bụ nke a na-achọkarị nke ọma ma nwee ike inye okwute ahụ ụdị foto nke agba sitere na odo mustardy ruo na ndị ọcha na agba aja aja.
Mookaite bụ akwụkwọ ndụ jasper nke Australia jikọtara ọnụ nke agba agba nke odo na odo jasper. Ọ na-akwado agụụ maka ahụmịhe ọhụụ ma na-enyere aka idozi nguzozi n'etiti ihe omume dị na mpụga na mmeghachi omume nke ndị a Ọ na-eme ka udo dị jụụ ma na-agba mbọ ịdọ aka na ntị.
Mookaite okwu a bu aha edeputara edeputara, nke anakpo dika ndi Jasper nke Australia. Kennedy Ranges nke Western Australia na mgbakwunye na nso Mooka Creek bụ ebe, ebe achọtara okwute a na aha ya. Jasper Australia a nwere ọkaibe na nke gbachapụrụ agbachapụ nke kristal Mookaite. A na-ahụkwa Mookaite Jasper dị ka nkume ịgwọ ọrịa siri ike nke na-ejikọta mmadụ na ike nke ụwa. A na - akpọkwa nnuku a aboriginal dị ka nne Earth Stone, nke bụ akụ a ma ama n'ụwa niile, n'ihi ike ọgwụgwọ ya yana ike njikọ ụwa.
Kristal kristal na-acha odo odo mebiri emebi na-apụta n'ọtụtụ ụdị dị ka Mookite, Moakite, Moukite, Mookalite, Mookerite, Mook ma ọ bụ Mook Jasper, dị ka nke Mooka Creek, bụ onye chepụtara okwute a. Mookaite bụ ezigbo iche iche.
Enwere ike ịmebata pink brecciated mookaite dị ka ngwakọta nke chert, opalite na chalcedony. Nkọwa ya dabere na ego silica, nke dị na ihe ahụ. Ingka nká na-egbu egbu bụ otu n'ime ihe ọgwụgwọ kachasị mkpa nke Mookaite okwute.
Pink brecciated mookaite bụ okwute nke ike, yana ime mkpebi.
Na Australia, mookaite a ka ewere na ọ bụ nkume ọgwụgwọ na-enye ike. A na-ekwu na ọ na-echebe onye weghara ya n'ọnọdụ siri ike na ijikọta anyị na ndị anyị hụrụ n'anya nwụrụ. Ekwenyere na ọ ga-eme ka anyị bata ebe a “ugbu a,” na-enyere aka nyocha nyocha na ime mkpebi.
Ntụgharị uche na mookaite Jasper ahụ na - eme ka ị nwekwuo ike, nweekwa ike ịhụ ọtụtụ ihe edozi maka nsogbu ọ bụla.
Pink kewara mookaite, si Australia